တိုက်ခန်းအသွင်အပြင်ခက်ခဲပါသလဲ ကုန်ကျစရိတ်ပျံ့နှံ့ဖ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းအသွင်အပြင်မြှင့်တင်ရန်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လူများစွာမေးမြန်းဖို့စပ်စုများမှာ: "ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အားလုံးကိုပိုင်ရှင်တွေအားဖြင့်မျှဝေတိုက်ခန်းများ၏အပြင်ပန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာလား?" ? ငါသည်လည်းမကြာခဏညည်းညူပိုင်ရှင်နားထောင်လော့ "ဟုအဆိုပါတိုက်ခန်းအဆောက်အဦး၏စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းကိုကျော်ရှာနေသီးခြားစီသို့မဟုတ်ပူးတွဲကျင်းပဖြစ်သင့်တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုရှာတွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခန်းများ၏သန်းပေါင်းများစွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများမြေတပြင်လုံးအိမျတျော၌ဖြစ်ပေါ်စေမည် အန္တရာယ်နှင့်ရှုပ်ထွေးနေရာတိုင်းထိုင်ဝမ်အတွက် tile ကိုမိုဃ်းရွာစေသ, စေတိုက်ခန်းဆွဲထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်လူတွေကို! "
တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံအရေပြား၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုအားပေးအားမြှောက်သောအခါ, ပြင်ပမြို့ရိုးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခန်း၏စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လတံ့သော, ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပသို့မဟုတ်ပူးတွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ အဆုံး၌, ပထမဦးဆုံးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်သည်, သို့မဟုတ်ကအားလုံးကိုအိမ်ပိုင်ရှင်အားဖြင့်မျှဝေသလဲ? ထိုင်ဝမ်သည်ပညတ်တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဤအမှုကိုထိန်းညှိလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တွေးမိတဲ့သူများစွာသောလူရှိပါတယ်။ ပြင်ပရိုးအတူတူကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှသောနေထိုင်သူများအားဖြင့်ပူးတွဲကျင်းပစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်ပါကတိုက်ခန်းအပေါငျးတို့သနေထိုင်သူများအားဖြင့်ကျင်းပစေခြင်းငှါထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - 6-1-02